Dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, ayaa waxay gubeen gaari dagaal oo ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya – STAR FM SOMALIA
Dagaal-yahano u daacad ah Ururka Al Shabaab, ayaa waxay gubeen gaari dagaal oo ay la socdeen Ciidanka Militariga Kenya, ee qaybta ka ah Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Shabaabka, ayaa gelinkii dambe ee Isniintii weeraray gaadiid ay la socdeen Ciidanka Kenya, oo maraayay Deegaanka Juungal, oo qiyaastii 35km dhinaca galbeed kaga toosan Degmada Baardheere Ee Gobolka Gedo.
Ciidankan, ayaa sahay ka soo qaaday Degmada Ceelwaaq oo dhacda xuduuda Somaliya iyo Kenya, waxaana la weeraray, xilli ay ku sii jeedeen Degmada Baardheere, oo ah Degmada ugu wayn ee Degmooyinka Gobolka Gedo.
Sarkaal diiday in magaciisa Warbaahinta loo adeegsado, ayaa sheegay in tiro askar ihi Ciidanka Kenya looga dilay weerarkaasi, markii gantaal lala helay gaarigii ay la socdeen.
Ururka Al Shabaab oo sheegtay masuuliyadda weerarkaasi, ayaa sidoo kale sheegay inay ku dileen Sarkaalkii hogaaminaayay Ciidankii la weeraray.
Saraakiisha Ciidanka Kenya, ayaan ka hadlin weerarka jid galka ah ee ka dhacay Deegaanka Juungal, waxaase suurtagal ah in saacadaha soo socda ka hadlaan.
Maamulka Qardho oo Beeniyay War dhawaan kasoo baxay Hay’ada Nabad Sugida Qaranka (Daawo Sawirada)